बैंकिंङ/बीमा - एनसीसी बैंक र नेको इन्स्योरेन्सबीच बीमा सेवा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक र नेको इन्स्योरेन्सबीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहकार्यात्मक सम्झौता भएको छ ।सम्झौतामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र नेको इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराम तिमिलाले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले कास्की जिल्लाको अमरसिङ्ग, जिरो कि.मी, लामाचौर गरी आफ्ना तिन शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ ।अमरसिङ्ग शाखाको उद्घाटन प्रदेश नं ४ का प्रदेश सभा सांसद मनबहादुर गुरुङ्गले गरेका हुन् । शाखा कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि गुरुङ्गले बैंकको बैंकिङ्ग व्यवसाय प्रबद्र्धनको लागि प्रोत्साहन गरे । जिरो कि.मी.शाखाको उद्घाटन आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्री किरण गुरुङ्गले गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
ज्योति विकास बैंकले एकैदिन खोल्यो ५ नयाँ शाखा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले आज ५ वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले भक्तपुर जिल्लाको बोडेमा, काभ्रेको बनेपामा तथा काठमाडौं जिल्लाका साखुँ, बलम्बु र कीर्तिपुरमा गरि एकैदिन पाँच नयाँ शाखा औपचौरिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बोडे शाखाको उद्घाटन मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष देवकृष्णमोय श्रेष्ठ तथा बैंकका संचालक जगदिश्वरप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । साथै, बनेपा शाखाको बनेपा नगरपालिकाका मेयर लक्ष्मी नरसिँह बादे श्रेष्ठ तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आज दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार आज भने झिनो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ८४ बिन्दुले बढेर एक हजार ११३ दशमलव ०७ बिन्दुमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव २७ बिन्दुले बढेर २३६ दशमलव ६० बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार आज कूल १५५ कम्पनीको चार लाख ७५ हजार ७६६ कित्ता शेयर रु १६ करोड ४४ लाख ७८ हजार ६८८ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । कारोवार भएका १० उपसमूहमध्ये आज तीन उपसमूहको शेयर घटेका छन् भने सात उपसमूहको शेयर वृद्धि भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण वस्नेत र सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको ६४ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जीबन बीमा पोलिसिहरु खरिद गर्न सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा पोखरामा उद्घाटन भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९, पावरहाउस चोक स्थित पावर हाउस चोकमा उक्त शाखा विस्तार भएको हो । एनआईसी एशिया बैंकका कास्की शाखाका प्रमुख कर्जा अधिकृत प्रकाश बरालले शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । बैंकका मुलुकभर २७७ शाखा कार्यालयहरु, २८९ एटिएम, ३९ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं २३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग इकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकको वासलातको आकार रू. २१७ अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुलनिक्षेप करिब रू. १७३ अर्ब तथा कर्जा रू. १४८ अर्ब रहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुमन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । स सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकले नेपालभर रहेका मुक्तिनाथ विकास बैंकका शाखाहरु मार्फत आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्ने छन् ।	थप पढ्नुहोस्
मुक्तिनाथले इटहरीमा वितरण गर्यो डस्टबीन
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरीको ईटहरी शाखाले डस्टबीन वितरण गरेको छ । ईटहरी बजार वरिपरीको सरसफाईमा ध्यानदिदैं टोल तथा बजारको सरसफाई गरी बजारका मुख्यचोकहरु लगायत इलाका प्रहरी कार्यालय, ईटहरीमा डस्टबीन वितरण गरेको बैंकका सूचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङले जनाएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले सर्वाधिक व्याज दर १०.२५५ सहितको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । उक्त ऋणपत्रमा बजारमा उपलब्ध अन्य ऋणपत्रहरु मध्ये सवैभन्दा बढि १०.२५५ व्याजदर रहेको छ । फागुन ११ गतेदेखि खरिद गर्न सकिने गरी १५ लाखकित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिएको हो । ५ वर्षमा परिपक्क हुने कुल १५ लाख कित्ता ऋणपत्र मध्ये ५ लाख ९७ हजार कित्ताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् भने ३ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी ९ लाख कित्ता संस्थागत लगानीकर्ताको लागि छुट्याईएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा ४८ अर्ब बाहिरियो
सेवा व्यापारमा खुदघाटा साढे ९ अर्बले वृद्धि काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा मुलुकको सेवा व्यापारमा खुदघाटा रु.९ अर्ब ४५ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु.१ अर्ब ४२ करोडले घाटामा रहेको बैंकले जनाएको छ । नेपालीहरु पर्यटकका रुपमा विदेश जाने हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपालमा आकर्षित गर्नसक्ने थप प्रडक्टहरुको व्यवस्था गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
प्रहरीकै गाडीमाथि जाँच ...
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र कैलाश ...
सुनको मूल्य तोलाको ६३ हजार ...
विश्वव्यापी मान्यता कार्यान्वयन ...
नार्कको सेवाप्रति वैज्ञानिक आकर्षित ...
बलात्कार कसुरमा छ वर्ष ...